ဆာလီဘာဟာ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာတော့မှာလား - Arsenal Myanmar News
ဆာလီဘာဟာ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာတော့မှာလား
အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့အတူ လာမယ့်ရာသီမှာ စတင်ကစားခွင့်ရရှိမယ့် လူငယ်နောက်ခံလူ ဝီလီယမ် ဆာလီဘာဟာ အသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ ဒေါက်တိုင်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာမယ်လို့ သူ့ကို ပေးအပ်လိုက်တဲ့ ကျောနံပါတ်ကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းနေကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
စိန့်အက်တီယန်ကို တစ်ရာသီအငှားနဲ့ သွားရောက်ကစားအပြီးမှာ ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဆာလီဘာကို အာဆင်နယ်အသင်းက ဂန္ထဝင်နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျောနံပါတ် ၄ ကို ဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီနံပါတ်ကြောင့် အနာဂတ်မှာ သူ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပေါ့သေးသေးတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ပရိသတ်တွေက ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
အရင်က ဒီကျောနံပါတ်ကို ဝတ်ဆင်နေတဲ့ မိုဟာမက် အယ်လ်နန်နီကတော့ ကျောနံပါတ် ၂၅ ကို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်ဖို့ သဘောတူညီခဲ့ပြီး ရာသီသစ်မှာ အသင်းရဲ့ ခံစစ်မှာတော့ ဆာလီဘာဟာ သူ့ရှေ့က ဒီနံပါတ်ကိုပဲ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူဟောင်း အကယ်ဒမီမန်နေဂျာ မာတီဆက်ကာရဲ့ ခြေရာကို နင်းနိုင်မလားလို့ စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
ဒီနံပါတ် ၄ ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်နံပါတ်လို့လည်း ပြောနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသူတွေထဲက ၃ ဦးဖြစ်တဲ့ ပက်ထရစ် ဗီယာရာ၊ ဆက်စ် ဖာဘရီဂက်စ်နဲ့ မာတီဆက်ကာတို့ဟာ ကပ္ပတိန်လက်ပတ်တွေကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသလို အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
နည်းပြ မီခယ်လ် အာတီတာကတော့ ဆာလီဘာအပေါ် မျှော်လင့်ချက်ကြီးမားသူဖြစ်ပြီး အသင်းရဲ့ ခံစစ်ပိုင်းမှာ ကြီးကြီးမားမား အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလို သူဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ခံယူချက်နဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိထားတယ်လို့ ပြောကြားထားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ ARSENAL MYANMAR.
UNICODE: အာဆငျနယျအသငျးနဲ့အတူ လာမယျ့ရာသီမှာ စတငျကစားခှငျ့ရရှိမယျ့ လူငယျနောကျခံလူ ဝီလီယမျ ဆာလီဘာဟာ အသငျးအတှကျ အရေးပါတဲ့ ဒေါကျတိုငျကစားသမားတဈဦးဖွဈလာမယျလို့ သူ့ကို ပေးအပျလိုကျတဲ့ ကြောနံပါတျကို ကွညျ့ပွီး ခနျ့မှနျးနကွေကွောငျး သိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
စိနျ့အကျတီယနျကို တဈရာသီအငှားနဲ့ သှားရောကျကစားအပွီးမှာ ပွနျရောကျလာခဲ့တဲ့ ဆာလီဘာကို အာဆငျနယျအသငျးက ဂန်ထဝငျနံပါတျတဈခုဖွဈတဲ့ ကြောနံပါတျ ၄ ကို ဝတျဆငျခှငျ့ပွုခဲ့တာဖွဈပွီး ဒီနံပါတျကွောငျ့ အနာဂတျမှာ သူ့ရဲ့ အခနျးကဏ်ဍက ပေါ့သေးသေးတော့ မဟုတျလောကျဘူးလို့ ပရိသတျတှကေ ခနျ့မှနျးနကွေပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
အရငျက ဒီကြောနံပါတျကို ဝတျဆငျနတေဲ့ မိုဟာမကျ အယျလျနနျနီကတော့ ကြောနံပါတျ ၂၅ ကို ပွောငျးလဲဝတျဆငျဖို့ သဘောတူညီခဲ့ပွီး ရာသီသဈမှာ အသငျးရဲ့ ခံစဈမှာတော့ ဆာလီဘာဟာ သူ့ရှကေ့ ဒီနံပါတျကိုပဲ ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ နောကျခံလူဟောငျး အကယျဒမီမနျနဂြော မာတီဆကျကာရဲ့ ခွရောကို နငျးနိုငျမလားလို့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာလညျးဖွဈပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
ဒီနံပါတျ ၄ ဟာ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျနံပါတျလို့လညျး ပွောနိုငျပွီး နောကျဆုံးဝတျဆငျခဲ့ကွသူတှထေဲက ၃ ဦးဖွဈတဲ့ ပကျထရဈ ဗီယာရာ၊ ဆကျဈ ဖာဘရီဂကျဈနဲ့ မာတီဆကျကာတို့ဟာ ကပ်ပတိနျလကျပတျတှကေို ဝတျဆငျခဲ့ကွသလို အသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွသနိုငျခဲ့သူတှလေညျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
နညျးပွ မီခယျလျ အာတီတာကတော့ ဆာလီဘာအပျေါ မြှျောလငျ့ခကျြကွီးမားသူဖွဈပွီး အသငျးရဲ့ ခံစဈပိုငျးမှာ ကွီးကွီးမားမား အကြိုးပွုနိုငျဖို့ ရညျရှယျထားသလို သူဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ စိတျဓာတျ၊ ခံယူခကျြနဲ့ ကွံ့ခိုငျမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတယျဆိုတာကို ကောငျးကောငျးသိထားတယျလို့ ပွောကွားထားခဲ့ကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။ ARSENAL MYANMAR.
By AM Author| 2020-07-23T18:34:17+00:00	July 23rd, 2020|News|Comments Off on ဆာလီဘာဟာ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာတော့မှာလား